အကောငျးတိုငျးမဖွဈ – My Blog
အဖွဈအပကျြတှကေကကွာသေးသေးတော.အခုခြိနျထိမကျြ နှာပူနတေုနျးပါပဲ။မထငျမှတျပဲဖွဈပကျြခဲ.တာတှကေက တူမလေးအသကျနှဈဆယျွ ပွညျ.မှေးနေ.လေးပေါ……………………… ကြှနျတော.နာမညျကမွတျသူအသကျကသုံးဆယျ.ခှနျ အလုပျကတော.ပနျးခြီဆရာတဈယောကျပါ။ပွီးတော. အပြျောတမျးဓာတျပုံဆိုငျလေးလဲဖှငျ.ထားသေးတယျ ကြှနျတော.မှာမှေးခငျြးညီအကိုနှဈယောကျရှိတယျ အကိုကွီးကကြှနျတျောဆယျ.ငါးနှဈသားမှာအိမျထောငျကပြွီး အခုကြှနျတော.မှာခဈြစရာကောငျးတဲ.တူမလေးတဈယောကျ ရှိတယျကြှနျတော.မရီဘကျတူသှားလို.အသားကဖွူဖှေးအု နပွေီးမကျြနှာသှယျသှယျလေးနဲ.ဆံပငျကကြောလညျလောကျ ရှိတယျခနာကိုယျလေးကတော.သှယျသှယျလြှလြှနဲ.ခတျေ ဆနျပွီးပှငျ.ပှငျ.လငျးလငျးပွောတကျဆိုတကျ ဆကျဆီ ကကြ ဝတျတကျစားတကျတော.ပတျဝနျးကငျြမှာသူ.ကိုလိုကျနေ ကွတဲ.ကောငျလေးတတေပုံကွီးပေါ.။
တဈခါတဈလတေော. လညျးကောငျလေးတှတေူမလေးအနာ.ကပျကာစာကားပွောနေ ရငျနညျးနညျးတော.အူတိုစိတျတှဖွေဈမိတာတော.အမှနျပါပဲ တူမလေးနာမညျကဆုနှငျးဝကြှေနျတျောကတော.ခဈြစနိုးနဲ. ဆုလို.ပဲချေါပါတယျ အကိုကွီးတို.မိသားစုနဲ.ကြှနျတျောကအတူတူမနဘေူးဗဒြါ ပမေယျ.လညျးအဝေးကွီးတော.မဟုတျပါဘူးတဈခွံကြျော လေးပါမိဘတှအေမှပေေးထားတဲ.ကိုယျ.ခွံနဲ.ကိုနကွေတာ ကြှနျတျောကလူပြိုကွီးပေါ.မခဈြတကျလို.တော.မဟုတျပါ ဘူးကြှနျတော.ဒဏျမခံနိုငျကွလို.ပွေးကွတာခညျြးပဲကြှနျ တျောကတျောတျောထနျတဲ.အထဲမှာပါတဲ.သူပေါ. လှနျခဲ.တဲ.နှဈလလောကျကတောငျတူမလေးနဲ.မတိမျးမရိမျး ခြာတိတျမလေးတဈယောကျနဲ.ညိလိုကျသေးတယျ ကောငျမလေးနာမညျကသရဖီကြှနျတျောကတော. ခလေးလို.ပဲချေါတယျရညျးစားဖွဈပွီးသုံးရကျပဲရှိသေးတယျ ကောငျမလေးကိုကြှနျတျော.အိမျချေါဖွုတျလိုကျတာပဲ သရဖီကညိုခြောလေးဂြောလေးကကိတျပွီးတငျးနတောပဲ ပေါငျတံလေးနှဈခြောငျးကစငျးလို.နို.လေးနှဈလုံးကလညျး ကော.ပွီးခြှနျနတောပဲကြှနျတျောသရဖီလေးကိုအပွီကို ကွိတျတာသရဖီရဲ.စောကျဖုတျလေးကညိုပွီးဖောငျးနတောပဲ လိုးခါနီးလေးစောကျမှေးတှရေိတျခိုငျးပွီးဘာဂြာမှုတျပေးလိုကျ တာကောငျမလေးမှာထှနျ.ထှနျ.ကိုလူးလို.။
သူမရဲ.နို.နှဈလုံး ကိုလညျးစိတျကွိုကျညဈခနြေယျပွီးစို.ပေးတော.ကောငျမလေး ကကြှနျတော.လီးကို.သူမရဲ.စောကျဖုတျဝကိုအတငျးတေ.ပေး တော.တာပဲကြှနျတျောကလညျးအလိုကျသငျ.လေးဆောငျ.ထိုး သှငျးပွီးအသားကုနျဆောငျ.လိုးတာကောငျမလေးခမြှာအျော လိုကျတာဗြာ။ ကြှနျတော.လီးကလညျးသာမနျလီးတှထေကျတော.ပိုပွီးရှညျတုတျလဲတုတျတော.ကောငျမလေးရဲ.စောကျ ဖုတျလေးကလီးထိုးသှငျးလိုကျတာနဲ.ပွဲကနဲပွဲကနဲပဲလီးခြောငျး ကွီးကိုအပွငျပွနျဆှဲထုတျလိုကျရငျစောကျဖုတျအတှငျးနှဈလှာက အတငျးစုပျငုံပွီးအပွငျဘကျကပျပါလာတာကွညျ.ရငျးလိုးရတာ
အရမျးကိုဖီးရှိလှပါတယျပကျလကျလှနျဖွဲပွီးအပျေါကဖိလိုးတာ ကောငျမလေးမှာတအီးအီးတအားနဲ.ညဉျးကာဖီးတှလှေိမျ.တကျ ပွီးစောကျရညျတှပေနျးထှကျလာတာနဲ.သူမကိုလေးဘကျထောကျပွောငျကုနျးခိုငျးပွီးဖငျထောငျပွီးလိုးတာအားရပါရပါပဲ ကောငျမလေးကလညျးအံကွိတျပွီးတော.ကိုခံတာကြှနျတျော ကလညျးမညာမတာကိုဆောငျ.ထညျ.တာမိနဈနှဈဆယျလောကျ ကွာမယျသူလညျပွီးကိုလညျးပွီးပဲသူမစောကျဖုတျလေးထဲလရညျတှပေနျးထညျ.ပွီးလီးကိုစောကျဖုတျလေးထဲက ပွနျဆှဲထုတျတော.လရညျတှကေစောကျဖုတျဝကမအေပွနျပွနျ စီးကလြာတယျ။
အဲဒီလောကျနဲ.ကြှနျတျောကအားမရသေးဘူးလရညျတှပေကြေံ နတေဲ.လီးခြောငျးကွီးကိုကောငျမလေးအားဆှဲထူဒူးထောကျ ထိုငျစေ၌သူမပါးစပျလေးထဲထိုးထညျ.ကာလီးစုပျခိုငျပွီး သူမရဲ.ပါးစပျကိုအာခေါငျထဲထိတိုငျဆောငျ.ထိုးကာလိုးပွီ လီးခြောငျးကွီးပွနျတငျမာလာပွီးစိတျထဲကနြေပျလောကျတော.မှ သူမအာကုတငျပျေါကဆငျးစောမတျတပျကုနျးခိုငျး၍အနျော ကနစေိတျကွိုကျဆောငျ.လိုးတာကောငျမလေးရဲ.ခနာကိုယျလေး ဟာခါရမျးနပွေီးအျောလိုကျတာလဲဗွောငျးဆနျနတောပဲ စောကျဖုတျလေးကမကဉျြးမကယျြလေးဆိုတော.လိုးရတာ
အရမျးအရသာရှိလှပါတယျဆယျမိနဈကြျောကြျောဆောငျ.ဗွငျး တာသူမသားအိမျခဏခဏထိုးမိလို.အတငျကော.ထှကျသှား တော.မှခြောကာမွူကာနဲ.ပကျလကျလှနျအိပခိုငျးပွီးလီးကို စောကျဖုတျလေးထဲတဈဆုံးထညျ.ပွီးမှပှကောမလိုခြီးပွီး လှကာလိုးတော.ကောငျမလေးမကျြနှာလေးမှာရှု.ံကာမဲ. လို.ရယျလှဲလှဲပွီးဆောငျ.တာတဗွုတျဗွုတျနဲ.လိုးရတာ အရမျးအားရလှပါတယျ။ အျောလိုကျတာလဲမပွောပါနဲ. အခနျးတဈခုလုံးသူအသံခညျြးပဲ။နာရီဝကျလောကျကွတော. ကြှနျတော.လိုးခကျြတှကွေောငျ.စောကျရညျတှဒေလဟောပနျး ထှကျပွီးကြှနျတော.ကိုအတငျးဖတျ၍ခနာကိုယျလေးကတဇတျ ဇတျတုနျလိုမကျြဖွူလေးလနျခငျြသလိုတောငျဖွဈနတေယျ အဲဒါနဲ.သူ.ကိုပှေ.ခြီထားနရောကနကေုတငျပျေါဝမျးလြှား မှောကျအနအေထားလေးထားပွီးသူမရဲ.ဖငျလေးနှဈလုံးကိုဖွဲကာ ဖငျပေါကျလေးထဲလီးဒဈခေါငျးတကေ့ာထိုးထညျ.တော. အောလိုကျတာငယျသံတောငျပါတယျသေးတှလေညျးပနျးထှကျ လို့။
ကြှနျတျောအတငျခြုပျပွီဖငျပေါကျလေးထဲအတငျးထိုးထညျ တာတျောတျောနဲ.မဝငျအတငျးဖွဈညှဈထားသလိုဖွဈနတောမို. တျောတျောအားစိုကျဖိထိုးမှဖငျခေါငျးလေးထဲလီးတဈဆုံးဝငျ သှားတယျသရဖီရဲ.ဖငျပေါကျလေးကစောကျဖုတျလေးထကျကို ပိုပွီးလိုးရတာဖီးရှိအရသာတှေ.လှသညျတဗွုနျးဗွုနျးနဲ.ဖငျကို လိုးတာသရဖီလေးမှာသတိရတဈခကျြမရတဈခကျြနဲစိတျကွိုကျ ကိုဗွငျတာသရဖီစောကျဖုတျလေးကလညျးသေးတှခေဏခဏပနျးထှကျတယျအာရပါးရသရဖီဖငျပေါကျလေးကို အပွီခှဲတာဆယျ.ငါးမိနဈလောကျကွာတော.ကြှနျတျောအရမျး ဖီးတှတေကျပွီးလီးကိုတောငျအပွငျပွနျမထုတျနိုငျဘူသရဖီရဲ. ဖငျထဲမှာပဲလရညျထှကျသှားကာသူ.အပျေါမှေုကျကလြို.
ကြှနျတော.ခနာကိုယျဟာတှနျ.ကနဲတှနျ.ကနဲဖဈခါအကွောဆှဲ သလိုဖွဈကာဖီးတကျနရေငျးအမောဖွနေမေိတယျ သရဖီလေးကတော.အသံတောငျမထှကျနိုငျရှာပါဘူး အမော.ပွတေော.နောကျတဈခြီဆှဲဖို.လုပျသေးတယျ ဘယျလိုမှညိလို.မရဘူးသရဖီလေးကအတငျးငွငျးကာ ငိုယိုနတောနဲ.အလြှော.ပေးလိုကျရတယျ ပထမနဲ.နောကျဆုံးပါပဲသူလဲကြှနျတော.တှေ.တာနဲ.ပွေး တော.တာပါပဲဖုနျးလဲဆကျလို.မရနဲပွတျသှားတယျဆိုပါတော. ဒီကနေ.မိုးကလညျးကောငျးနတောနဲ.အပွငျမထှကျဖွဈပဲ အိမျထဲမှာတဈယောကျတညျးညကတဈပိုငျးလောကျကနျြ တဲ.ဂြျောနီဝါးကားနဲ.ညိမျ.နတောအောကားလေးကွညျ.ရငျး နဲ.ပေါ.အောကားကအရှိနျတကျနတေုနျလှကေားပျေါတကျ လာတဲ.ခသြေံကွားတာနဲ.တီဗီကိုလမုနဲ.အမွနျပိတျလိုကျရ တယျ။
ကြှနျတော.အိမျထဲအသံမပေးပဲဝငျလာနိုငျတာက ကြှနျတော.တူမလေးတဈယောကျပဲရှိတာကိုးခွံသော.ရော အိမျသော.ရောသူ.ဆီတဈစုံပေးထားတာကွောငျ.ပါ သိပျမကွာပါဘူကြှနျတော.ဘေးန.တူမလေးဆုရောကျလာပွီး ဘေးခငျြးကပျထိုငျလို. လေးလေးကကောငျးနပွေီလားတဈလုံးတောငျကုနျတော.မယျ မကောငျးသေးပါဘူးဆုရယျညကလကျကနျြလေးဖွိုနတော ညဉျးထီးမဆောကျးလာဘူးလားခေါငျးမှာလဲရတှေနေဲ.မဖွဈ သေးပါဘူး ကြှနျတျောအခနျးထဲကမကျြနှာသုတျပဝါသှားယူကထိုငျနတေဲ. တူမလေးရဲ.အရှရေ့ပျကာတူမလေးရဲ.စိုနတေဲ.ခေါငျးအား သခြောခွောကျအောငျသုတျပေးနမေိတယျ အဲဒီမှာအမှတျမထငျဖွဈသှားတာကကြှနျတျောသတိမထားမိတာ ပွောပါတယျအောကားကွညျ.ရငျးတနျးလနျးဆိုတော.
လီးကတောငျနတောဝတျထားတာကလဲပုဆိုးဖွဈနတေော. ကြှနျတော.လီးကိုပုဆိုးပျေါကနတေူမလေးဆုပျကိုငျပွီး လေးလေးဟာကွီးကမာတောငျနတောပဲ ဟဲ.လှတျလှတျဒီကောငျမလေးအဲဒါဆော.စရာမှတျနလေား မလှတျဘူကှာဆုအခုဆိုအသကျနှဈဆယျတောငျပွညျ.ပွီး လို.ရညျးစားတောငျရနပွေီလေးလေးဟာကွီးကကိတျလို. ကိုငျကွညျ.တာဘာဖွဈလဲ နငျ.ရညျးစားဟာနငျကိုငျတာဘာမှမဖွဈဘူးနငျနဲ.ငါကဦးလေး နဲ.တူမမကိုငျရဘူး မလှတျပါဘူးဆုရညျးစားကစာဂပြိုးစာကလှဲရငျဘာမှသုံးစားမ ရဆုဒီလောကျလမျးကွောငျးခငျးတာတောငျဘာမှမဘာဘူး ပွီးတော.ဆုအငျးစကျအရာသာဆိုတာဘာလဲမွညျးစမျးကွညျ. ခငျြတယျလေးလေးကဆုရဲ.ခဈြလေးလေးပဲဟာကို လေးလေးအငျးစကျဆိုတာရောသိရဲ.လား ဟငါကလူကွီးပဲမသိပဲနမေလား။
ဒါဆိုလေးလေးနဲ.ဆုတို.အငျးစကျအရသာအတူတူမြှဝခေံစား ကွမလေ တူမလေးကစကားသာပွောနတောလီးခြောငျးကွီးအား ဂှငျးဆှဲပေးသလိုဆှပေးနတေော.ကြှနျတော.စိတျတှပေါလာ တယျအဲဒီအထိစိတျထဲတငျထားပမေယျ.ဆုလေးကပုဆိုးကို ဆှဲခြှတျပွီးကြှနျတော.လီးဒဈခေါငျးကွီးကိုဖွတျကနဲဆှဲစုပျတော. ကြှနျတော.အသိစိတျတှဝေေးကှာသှားပွီးတူမလေးရဲ.လီးစုပျ ပေးမှုအားသာယာပွီးသူ.ခေါငျးလေးအားအလိုကျသငျ.လေး ထိနျးပေးကာကိုယျကပါသု.ပါးစပျလေးထဲလီးခြောငျးကွီးအာ.း ဆောငျ.ထိုးနမေိပါတယျ ပွှတျပွှတျပွှတျပလပျပလပျပွှတျပွှတျပွှတျ………………… အိုးကောငျးလိုကျတာဆုလေးရယျအိုးအိုးဟူးဟူး တူမလေးကမခဘေူးဗစြုပျခကျြတှကေထိထိမိမိနဲ.ပညာသားပါ လှနျးပါတယျလီးဒဈခေါငျးကွီးအားလြှာနှငျလိပျကာလြှပျလိုကျ
လီးခြောငျးကွီးအားအောကျခမြှေဒဈဖြားဆီသိုလြှာအပွားလိုကျ ပငျ.လြှပျလိုကျဂှေးအုနှဈလုံးကိုလညျးတဈလုံးခငျြးစုပျငုံလိုကျနှငျ. ကြှနျတျော.မှာဖီတှလှေိမျ.ကာလှိမျ.ကာတကျလာတာဒဈခေါငျး ထိပျဆီသိုလရညျတှအေတငျးဆောငျ.တိုးကာပနျးထှကျခငျြ သလိုလိုဖွဈလာရသညျ ဆုလေးအအလေးလေးထှကျတော.မယျဖယျဖယျအအ လေးေးပနျးထညျ.လိုကျသမီးပါးစပျထဲမှာပဲပွီးလိုကျ သမီးမြိုခပြွဈလိုကျမယျ အားမရတော.ဘူးအအအရှီးဖလှတျဖလှတျဗွဈဖလှတျ ကြှနျတော.လရညျတှကေတူမလေးရဲ.ပါးစပျထဲအရှိနျပွငျးစှာ ပနျးဝငျပွီးမြားလှနျးလိုတုမလေးရဲ.နုတျခမျးထောငျ.နှဈဖကျစီက နပွေနျလြှံကလြာလို.တူမလေူးကလကျဝါးလေးနဲအမွနျသပျ ပွီးအကုနျမွိုခပြွဈတယျ လေးလေးလရညျတှကေညှီစို.စို.ငံကွိကွိနဲ. ဟိဟိ နငျလရညျမသောကျဖူးဘူးလား မသောကျဖူးပါဘူးသမီးပါးစပျထဲဝငျတာလေးလေးလရညျက ပထမဆုံးပဲနှနေတောပဟိ..။
အေးပါပါးစပျထဲတငျမဟုတျဘူးစောကျဖုတျလေးထဲရော ဖငျခေါငျးထဲပါလရညျထညျ.တော.မှာ လေးလေးကသမီးကိုဖငျပါလိုးမှာလားရငျခုနျစရာကွီး ကဲကဲဆုလေးအဝျအစားတှခြှေတျပွဈလိုကျတော. နငျ.စောကျဖုတျလေးကိုငါဖွဲပွီးအပွီလြှပျပေးအုံးမယျ လေးလေးသမီးစောကျပတျလေးလြှပျရငျသမီးငရဲကွီးမှာပေါ. ကွီးကွီးဟာကို.တူမစောကျပတျလေးသခြောလြှပျပေးခငျြ သေးတယျ အဝတျအစားတှအေကုနျခြှတျလိုကျတော.တူမလေးရဲ.ခနာကိုယျ လေးကပိုပွီးအသညျးယားပွီးကွိတျခငျြစဖှယျလေး နို.လေးနှဈလုံးကလညျးဖွူအုနပွေီးနို.သီးခေါငျးလေးတှကေရဲလို. ပေါငျတံနှဈခြောငျးလညျးဖြောငျ.ဈးကာစောကျဖုတျဖွူဖွူလေး ကသိသိသာသာဖောငျထလို.နတေယျစောကျမှေးလုံးဝမရှိပဲ ပွောငျပွီးဖှေးနတောပဲဗြာလိုးခငျြစရာလေးပေါ. လေးလေးဘာစိုကျကွညျ.နတောလဲကှ.ဆုရှကျလာပွီ
ငါ.တူမလေးကလှလှနျးတော.မငျသကျမိသှားတာ ကြှနျတျောဆုလေးအားအသာဖကျ၍သူမရဲ.နုတျခမျးပါးလေး အားကွငျနာစှာနဲ.စုပျယူသလိုဆုလေးကလညျအလိုကျသငျ.လေးပွနျလညျကာစုပျကြှနျတျောလြှာနဲ.ဆုရဲ.လြှာလေးရဈပတျ စုပျယူနဲနှဈမိနဈခနျ.ကဈဆငျရိုကျတာတူမလေးမှာ မကျြလုံးလေးကိုစငျးလို. ကဈဆငျဆှဲလို.ဝတော.ဆိုဖာပျေါထိုငျစေ၍ဆုလေးရဲ.ောငျနှဈဖကျကိုဖွဲကာပေါငျနှဈလုံးကွားထဲခေါငျထိုးဒူးထောကျ ထိုငျ၍မိုမောကျနတေဲ.စောကျဖုတျကှဲကွောငျးလေးကိုလြှာ အပွားလိုကျအပျေါမှအောကျအောကျမှအပျေါသို.ပငျ.လြှပျပေး မိပါသညျ အှနျး အူး ကောငျးလိုကျတာလေးလေးရယျ အငျးဟငျးဟငျး ကောငျးလိုကျတာ အရမျးဖီးရှိတာပဲ ဟငျ.ဟငျ. အဟျ. ဟငျး လေးလေးရယျ တူမလေးကတော.ကြှနျတျော.ဆံပငျတှကေိုပှတျသပျကစား ရငျးဖီးတှလှေိမျ.တကျကာစောကျရညျတှဗွေဈကနဲထှကိတာ ကြှနျတော.ပါးစပျထဲတနျးကနဲပဲဒါပမေယျ.ထှေးမထုတျပွဈမိပါ ဘူးဆကျပွီးတော.တူမလေးရဲ.စောကျဖုတျလေးအားဖွဲပွီးတော. ကိုမှုတျပွဈတာစောကျစိလေးကိုစုပျလိုကျစောကျဖုတျအတှငျး သားနှဈဖကျကိုလြှပျပေးလိုကျစောကျခေါငျးပေါကျလေးကို လြာဖြားလေးနဲ.ထိုးကျောလိုကျစောကျခေါငျးထဲလကျခလှယျနဲ. အဆကျမပွတျထိုးနိုကျလိုကျနဲ.တူမလေးအားအစှမျးကုနျပွုစု ပေးနမေိပါသညျ။
အငျအငျးအငျးဟငျးဟငျးလေးလေးရယျ အူးဟူးဟူး အငျးကောငျးလိုကျတာ အဟငျ. အငျးဟငျးဟငျး လေးလေးထှကျတော.မယျ သမီးထှကျတော. အအအအအအ ဟီး………. ဗွဈပွဈပတဈ ရှူးရှီးရှီး တူမလေးဖီးတကျပုံမြားစောကျရညျမြားတငျမကပဲသမြေား ပါပနျကာထှကျကွလာသညျ ဖီးတကျပွီးမှိနျးနတေဲ.တူမလေးရဲ.ပေါငျနှဈလုံးကွားက မို.ဖောငျးနတေဲ.စောကျဖုတျကွောငျးလေးအား လီးဒဈခေါငျးကွီးနှငျ.သေးတိတျတဲ.အထိအထကျအောကျဖိ ကပျပှတျပေးနရေငျးမှသေးထှကျတာရပျသှားတော. စောကျဖုတျဝလေးမှာလီးဒဈခေါငျးကိုသသေခြောခြာတေ.ကာ စောကျဖုတျလေးထဲထိုးသှငျးလိုကျပါသညျ ဗွိ ဗွိ ဗွိ ဗွုတျ အမေ.အားလားလား နာတယျ လေးလေး နာလိုကျတာ အပြိုစငျစောကျဖုတျလေးကလီးဒဈခေါငျးကွီးထိုးခှဲမှုကွောငျ. ပွဲဟနကောစောကျဖုတျလေးထဲလီးကနှဈလကျမလောကျ မှုပျဝငျနပေါသညျ
ဆုလေးကိုကွညျ.တော.မကျြရညျလေးဝဲလို. ဆုလေးရရဲ.လားခံနိုငျရဲ.လားအရမျးကောနာနလေား နာတော.နာတာပေါ.လေးလေးကအတငျးထိုးထညျ.တာကိုး အရမျးကွီးပဲဖွညျ.းဖွညျးခငျြးထညျ.ပါလားကိုယျ.တူမလေးကို အေးပါစုရယျကဲကဲနညျးနညျးထပျထညျ.ကွညျ.မယျ ဗွိဗွိဗွုတျဖောကျ အားသပွေီ ကှဲပါပွီလေးလေးရဲ.အီးဟီးဟီး လီးဒဈခေါငျးကွီးကပါကငျပေါကျလေးအားထိုးခှဲပွီး ငါးလကျမခနျ.စောကျဖုတျလေးထဲမွုပျဝငျကာနသေညျ စညျးခုံလေးကလညျးအထဲသို.ကြှံဝငျလို. လီးကိုစောကျဖုတျလေးထဲကအပွနျဆှဲထုတျတော. စောကျဖုတျနုတျခမျးနှဈလှာကအပွငျဘကျလနျထှကျပါလာကာ လီးခြောငျးတဈဝကျကြျောခနျ.သှေးမြားစိုနသေဖွငျ. လီးကိုစောကျဖုတျအပွငျဘကျထုတျကာသှေးမြားအားပွောငျ အောငျသုတျ၍လဒဈခေါငျးအားတံတှေးစှတျကာစောကျဖုတျ ဝ၌ပွနျတေ.ကာစောကျဖုတျလေးထဲတဆုံးထိထိုးသှငျးလိုကျ ပါသညျ။
အအအအ အီးဖွေးဖွေး အားနာတယျလေးလေး အီး တူမလေးကတော.သူမစောကျဖုတျလေးထဲလီးထိုးထညျ. လိုကျတိုငျးအျောခငျြရာအျောတော.တာပါပဲ စောကျဖုတျလေးကအပြိုစဈတော.ကွပျထုတျနပွေီး လဒဈထိပျကထုတျထုတျထုတျနဲ.လိုးရတာအရမျးဖီးတှေ. သှားသဖွငျခပျကွမျးကွမျးလေးဆောငျ.ထိုးလိုးပွဈမိသညျ ဗွုတျဗွုတျဗွုတျဗွုနျးဖောကျထုတျဘုတျဗွှတျ အအအအအအအအ အီးအီးအီး အူးအူးအူးမကွေီးရေ စောကျဖုတျလေးထဲကခြောဆီတှတေရှမျးရှမျးထှကျလာ သဖွငျမကျြလုံးမှိတျပွီးအသားကုနျနငျးကနျဆောငျ.လိုးတာ တူမလေးကနာလို.အတငျးကုတျဖဲ.အျောဟဈကြှနျတျောက လညျးအသားကုနျအပွီမညှာမတာဆောငျ.လိုးနဲ. တခနျးလုံးဆူညံနပွေီးနာရီဝကျလောကျကွာတော. စောကျရမျးဖီးတကျလာပွီးပိုပွီးမွနျမွနျလေးဆောငျ.လိုး တူမလေးကလညျးဖီးတကျလာလို.လားတော.မသိဘူး အတငျးကုနျးထပွီးကြှနျတော.အားဖကျပွီးစောကျဖုတျလေးကို ကြုံ.ထားကြှနျတျောကအသာထပွီခြီပွီးလှဲလိုးတာ တဗွောငျးဗွောငျးနဲ.ကိုအသံထှကျတယျ အားရပါရးကိုလှဲလိုးတာတူမလေးအျောတာကလဲ လိုးသတျနတေဲ.အတိုငျးပဲခြီပွီးအပွီဗွငျးနတေုနျးဆယျမိနဈ ခနျ.မှာပဲတူမလေးရောကြှနျတျောပါပွိုငျတူလိုလိုပွီးသှား ကွပါတယျစောကျရညျတှကေကွမျးပွငျပျေါတဈတောကျ တောကျကလြို.ရယျကြှနျတျော.လရညျတှကေတော. တုမလေးရဲ.စောကျခေါငျးထဲမှာပေါ.လိးဆို.နလေို.သာ ပွနျမကသြေးတာတူမလေးအားခြီထားလကျြပငျအမောဖွေ နမေိပါသညျ။
တူမလေးကကြှနျတော.အားခပျတငျးတငျး ဖကျထားရငျးတအငျးအငျးညဉျးလြှကျရယျ ကြှနျတျောအမောပွတေော.တူမလေးအားခြီလကျြပငျရခြေိုး ခနျးထဲချေါသှားကာရခြေိုးခနျးထဲရောကျမှခြီထားရာမှအသာခြ ကာမကျတပျရပျကုနျးခိုငျးထားပွီးပြော.နတေဲ.လီးအာဂှငျးတိုကျ ကာပွနျဆှ၌ရပေနျးကိုဖှငျ.ကာရပေနျးအောကျ၌တူမလေးအာ မတျတပျရပအနအေထားနဲ.သူမရဲ.နို.လေးနှဈလုံးအာညဈကာ အနောကျကနအေပွီဖွုတျပါသညျ ခါးလေးကိုငျပွီးဆောငျ.လိုးလိုကျဆံပငျဆောငျ.ဆှဲပွီး အသာကုနျလိုးလိုကျနှငျ.တျောတျောလိုးရတာ စိတျတိုငျးကွလှပါသညျအရမျးလဲဖီးရှိလှသညျ ပေါငျလေးတဈခြောငျအသာမရငျးနငျးကနျဆောငျ. ထညျတာတူမလေးမှာအာခေါငျခွဈအျောလှနျးလို. သူမရဲ.ပါးစပျကိုပိတျရငျအဆကျမပွတျမနားတမျးဖိကပျပွီး နှားသိုးကွိုးပွတျလိုးတာကြှနျတျောသူမစောကျခေါငျးထဲ လရညျတှပေနျးထှကျသှားတော. တူမလေးမှာကွမျးပွငျပေါလေးဘကျထောကျလေး ကုနျးကုနျးလေးလဲကာအသဲမထှကျတော. လီးကလရညျသာထှကျတာမာတောငျနဆေဲစိတျထဲက လညျးမတငျးတိမျနိုငျသေးသဖွငျတူမလေးရဲဖငျကိုဖွဲကာ ဖငျပေါကျထဲသို.လီးအားအတငျးထိုးကာအဆုံးထိထညျ. ရငျအပျေါကနခှေပွီအားရပါးရလိုးတာတူမလေးမှာအျောရလှနျး လို.အသံတောငျမထှကျနိုငျတော.ဘူး တူမလေးဖငျကိုစိတျလှတျလကျလှတျအသားကုနျကို လိုးတာတူမလေးမှာသတိလဈပွီးသေးတှပေနျးထှကျလို.ရယျ ဆယျမိနဈလောကျပဲကွာပါတယျ။
မရပျမနားဆောငျ.ထညျ.တာလဒဈထိပျကမတရားတငျးလာပွီး တူမလေးရဲ.ဖငျထဲမှာပဲလရညျထှကျကာသှားပါတယျ လိုးလို.ကောငျးလိုကျတာတကယျပါပဲ ခနာကိုယျတဈခုလုံးအားအငျကုနျခမျးသှားသလိုပါပဲ တူမလေးကလဲကွမျးပွငျမှာခှခှေလေေးကြှနျတျောတူမလေး ၌လှဲကာတာူမလေးအားဖကျလို.အိပျပြျောသှားမိပါတော.တယျ ကြှနျတျော.လိုးခကျြတှကွေောငျ. လှပမို.ဖောငျးလှတ.စောကျဖုတျလေးဟာအခုတော. အတှငျးသားနှဈဖကျအပွငျဘကျသို.လှနျထှကျကာ အရငျကကဲ.သို.လှပမှုမရှီတော.ပါ အရာရာအားလုံးဟာလှနျကြှံသှားရငျ အကောငျးတိုးပွနျဖွဈမလာနိုငျပါ………… ပွီးပါပွီ။
အဖြစ်အပျက်တွေကကကြာသေးသေးတော.အခုချိန်ထိမျက် နှာပူနေတုန်းပါပဲ။မထင်မှတ်ပဲဖြစ်ပျက်ခဲ.တာတွေကက တူမလေးအသက်နှစ်ဆယ်ြ ပြည်.မွေးနေ.လေးပေါ……………………… ကျွန်တော.နာမည်ကမြတ်သူအသက်ကသုံးဆယ်.ခွန် အလုပ်ကတော.ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ပါ။ပြီးတော. အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆိုင်လေးလဲဖွင်.ထားသေးတယ် ကျွန်တော.မှာမွေးချင်းညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ် အကိုကြီးကကျွန်တော်ဆယ်.ငါးနှစ်သားမှာအိမ်ထောင်ကျပြီး အခုကျွန်တော.မှာချစ်စရာကောင်းတဲ.တူမလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်ကျွန်တော.မရီဘက်တူသွားလို.အသားကဖြူဖွေးအု နေပြီးမျက်နှာသွယ်သွယ်လေးနဲ.ဆံပင်ကကျောလည်လောက် ရှိတယ်ခနာကိုယ်လေးကတော.သွယ်သွယ်လျှလျှနဲ.ခေတ် ဆန်ပြီးပွင်.ပွင်.လင်းလင်းပြောတက်ဆိုတက် ဆက်ဆီ ကျကျ ဝတ်တက်စားတက်တော.ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ.ကိုလိုက်နေ ကြတဲ.ကောင်လေးတေတပုံကြီးပေါ.။
တစ်ခါတစ်လေတော. လည်းကောင်လေးတွေတူမလေးအနာ.ကပ်ကာစာကားပြောနေ ရင်နည်းနည်းတော.အူတိုစိတ်တွေဖြစ်မိတာတော.အမှန်ပါပဲ တူမလေးနာမည်ကဆုနှင်းဝေကျွန်တော်ကတော.ချစ်စနိုးနဲ. ဆုလို.ပဲခေါ်ပါတယ် အကိုကြီးတို.မိသားစုနဲ.ကျွန်တော်ကအတူတူမနေဘူးဗျဒါ ပေမယ်.လည်းအဝေးကြီးတော.မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခြံကျော် လေးပါမိဘတွေအမွေပေးထားတဲ.ကိုယ်.ခြံနဲ.ကိုနေကြတာ ကျွန်တော်ကလူပျိုကြီးပေါ.မချစ်တက်လို.တော.မဟုတ်ပါ ဘူးကျွန်တော.ဒဏ်မခံနိုင်ကြလို.ပြေးကြတာချည်းပဲကျွန် တော်ကတော်တော်ထန်တဲ.အထဲမှာပါတဲ.သူပေါ. လွန်ခဲ.တဲ.နှစ်လလောက်ကတောင်တူမလေးနဲ.မတိမ်းမရိမ်း ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်နဲ.ညိလိုက်သေးတယ် ကောင်မလေးနာမည်ကသရဖီကျွန်တော်ကတော. ခလေးလို.ပဲခေါ်တယ်ရည်းစားဖြစ်ပြီးသုံးရက်ပဲရှိသေးတယ် ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်.အိမ်ခေါ်ဖြုတ်လိုက်တာပဲ သရဖီကညိုချောလေးဂျောလေးကကိတ်ပြီးတင်းနေတာပဲ ပေါင်တံလေးနှစ်ချောင်းကစင်းလို.နို.လေးနှစ်လုံးကလည်း ကော.ပြီးချွန်နေတာပဲကျွန်တော်သရဖီလေးကိုအပြီကို ကြိတ်တာသရဖီရဲ.စောက်ဖုတ်လေးကညိုပြီးဖောင်းနေတာပဲ လိုးခါနီးလေးစောက်မွေးတွေရိတ်ခိုင်းပြီးဘာဂျာမှုတ်ပေးလိုက် တာကောင်မလေးမှာထွန်.ထွန်.ကိုလူးလို.။
သူမရဲ.နို.နှစ်လုံး ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ညစ်ချေနယ်ပြီးစို.ပေးတော.ကောင်မလေး ကကျွန်တော.လီးကို.သူမရဲ.စောက်ဖုတ်ဝကိုအတင်းတေ.ပေး တော.တာပဲကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်သင်.လေးဆောင်.ထိုး သွင်းပြီးအသားကုန်ဆောင်.လိုးတာကောင်မလေးခမျှာအော် လိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော.လီးကလည်းသာမန်လီးတွေထက်တော.ပိုပြီးရှည်တုတ်လဲတုတ်တော.ကောင်မလေးရဲ.စောက် ဖုတ်လေးကလီးထိုးသွင်းလိုက်တာနဲ.ပြဲကနဲပြဲကနဲပဲလီးချောင်း ကြီးကိုအပြင်ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်စောက်ဖုတ်အတွင်းနှစ်လွှာက အတင်းစုပ်ငုံပြီးအပြင်ဘက်ကပ်ပါလာတာကြည်.ရင်းလိုးရတာ
အရမ်းကိုဖီးရှိလှပါတယ်ပက်လက်လှန်ဖြဲပြီးအပေါ်ကဖိလိုးတာ ကောင်မလေးမှာတအီးအီးတအားနဲ.ညဉ်းကာဖီးတွေလှိမ်.တက် ပြီးစောက်ရည်တွေပန်းထွက်လာတာနဲ.သူမကိုလေးဘက်ထောက်ပြောင်ကုန်းခိုင်းပြီးဖင်ထောင်ပြီးလိုးတာအားရပါရပါပဲ ကောင်မလေးကလည်းအံကြိတ်ပြီးတော.ကိုခံတာကျွန်တော် ကလည်းမညာမတာကိုဆောင်.ထည်.တာမိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် ကြာမယ်သူလည်ပြီးကိုလည်းပြီးပဲသူမစောက်ဖုတ်လေးထဲလရည်တွေပန်းထည်.ပြီးလီးကိုစောက်ဖုတ်လေးထဲက ပြန်ဆွဲထုတ်တော.လရည်တွေကစောက်ဖုတ်ဝကမေအပြန်ပြန် စီးကျလာတယ်။
အဲဒီလောက်နဲ.ကျွန်တော်ကအားမရသေးဘူးလရည်တွေပေကျံ နေတဲ.လီးချောင်းကြီးကိုကောင်မလေးအားဆွဲထူဒူးထောက် ထိုင်စေ၌သူမပါးစပ်လေးထဲထိုးထည်.ကာလီးစုပ်ခိုင်ပြီး သူမရဲ.ပါးစပ်ကိုအာခေါင်ထဲထိတိုင်ဆောင်.ထိုးကာလိုးပြီ လီးချောင်းကြီးပြန်တင်မာလာပြီးစိတ်ထဲကျေနပ်လောက်တော.မှ သူမအာကုတင်ပေါ်ကဆင်းစောမတ်တပ်ကုန်းခိုင်း၍အနော် ကနေစိတ်ကြိုက်ဆောင်.လိုးတာကောင်မလေးရဲ.ခနာကိုယ်လေး ဟာခါရမ်းနေပြီးအော်လိုက်တာလဲဗြောင်းဆန်နေတာပဲ စောက်ဖုတ်လေးကမကျဉ်းမကျယ်လေးဆိုတော.လိုးရတာ
အရမ်းအရသာရှိလှပါတယ်ဆယ်မိနစ်ကျော်ကျော်ဆောင်.ဗြင်း တာသူမသားအိမ်ခဏခဏထိုးမိလို.အတင်ကော.ထွက်သွား တော.မှချောကာမြူကာနဲ.ပက်လက်လှန်အိပခိုင်းပြီးလီးကို စောက်ဖုတ်လေးထဲတစ်ဆုံးထည်.ပြီးမှပွေကာမလိုချီးပြီး လွှကာလိုးတော.ကောင်မလေးမျက်နှာလေးမှာရှု.ံကာမဲ. လို.ရယ်လွှဲလွှဲပြီးဆောင်.တာတဗြုတ်ဗြုတ်နဲ.လိုးရတာ အရမ်းအားရလှပါတယ်။ အော်လိုက်တာလဲမပြောပါနဲ. အခန်းတစ်ခုလုံးသူအသံချည်းပဲ။နာရီဝက်လောက်ကြတော. ကျွန်တော.လိုးချက်တွေကြောင်.စောက်ရည်တွေဒလဟောပန်း ထွက်ပြီးကျွန်တော.ကိုအတင်းဖတ်၍ခနာကိုယ်လေးကတဇတ် ဇတ်တုန်လိုမျက်ဖြူလေးလန်ချင်သလိုတောင်ဖြစ်နေတယ် အဲဒါနဲ.သူ.ကိုပွေ.ချီထားနေရာကနေကုတင်ပေါ်ဝမ်းလျှား မှောက်အနေအထားလေးထားပြီးသူမရဲ.ဖင်လေးနှစ်လုံးကိုဖြဲကာ ဖင်ပေါက်လေးထဲလီးဒစ်ခေါင်းတေ့ကာထိုးထည်.တော. အောလိုက်တာငယ်သံတောင်ပါတယ်သေးတွေလည်းပန်းထွက် လို့။
ကျွန်တော်အတင်ချုပ်ပြီဖင်ပေါက်လေးထဲအတင်းထိုးထည် တာတော်တော်နဲ.မဝင်အတင်းဖြစ်ညှစ်ထားသလိုဖြစ်နေတာမို. တော်တော်အားစိုက်ဖိထိုးမှဖင်ခေါင်းလေးထဲလီးတစ်ဆုံးဝင် သွားတယ်သရဖီရဲ.ဖင်ပေါက်လေးကစောက်ဖုတ်လေးထက်ကို ပိုပြီးလိုးရတာဖီးရှိအရသာတွေ.လှသည်တဗြုန်းဗြုန်းနဲ.ဖင်ကို လိုးတာသရဖီလေးမှာသတိရတစ်ချက်မရတစ်ချက်နဲစိတ်ကြိုက် ကိုဗြင်တာသရဖီစောက်ဖုတ်လေးကလည်းသေးတွေခဏခဏပန်းထွက်တယ်အာရပါးရသရဖီဖင်ပေါက်လေးကို အပြီခွဲတာဆယ်.ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော.ကျွန်တော်အရမ်း ဖီးတွေတက်ပြီးလီးကိုတောင်အပြင်ပြန်မထုတ်နိုင်ဘူသရဖီရဲ. ဖင်ထဲမှာပဲလရည်ထွက်သွားကာသူ.အပေါ်မှေုက်ကျလို.
ကျွန်တော.ခနာကိုယ်ဟာတွန်.ကနဲတွန်.ကနဲဖစ်ခါအကြောဆွဲ သလိုဖြစ်ကာဖီးတက်နေရင်းအမောဖြေနေမိတယ် သရဖီလေးကတော.အသံတောင်မထွက်နိုင်ရှာပါဘူး အမော.ပြေတော.နောက်တစ်ချီဆွဲဖို.လုပ်သေးတယ် ဘယ်လိုမှညိလို.မရဘူးသရဖီလေးကအတင်းငြင်းကာ ငိုယိုနေတာနဲ.အလျှော.ပေးလိုက်ရတယ် ပထမနဲ.နောက်ဆုံးပါပဲသူလဲကျွန်တော.တွေ.တာနဲ.ပြေး တော.တာပါပဲဖုန်းလဲဆက်လို.မရနဲပြတ်သွားတယ်ဆိုပါတော. ဒီကနေ.မိုးကလည်းကောင်းနေတာနဲ.အပြင်မထွက်ဖြစ်ပဲ အိမ်ထဲမှာတစ်ယောက်တည်းညကတစ်ပိုင်းလောက်ကျန် တဲ.ဂျော်နီဝါးကားနဲ.ညိမ်.နေတာအောကားလေးကြည်.ရင်း နဲ.ပေါ.အောကားကအရှိန်တက်နေတုန်လှေကားပေါ်တက် လာတဲ.ချေသံကြားတာနဲ.တီဗီကိုလမုနဲ.အမြန်ပိတ်လိုက်ရ တယ်။
ကျွန်တော.အိမ်ထဲအသံမပေးပဲဝင်လာနိုင်တာက ကျွန်တော.တူမလေးတစ်ယောက်ပဲရှိတာကိုးခြံသော.ရော အိမ်သော.ရောသူ.ဆီတစ်စုံပေးထားတာကြောင်.ပါ သိပ်မကြာပါဘူကျွန်တော.ဘေးန.တူမလေးဆုရောက်လာပြီး ဘေးချင်းကပ်ထိုင်လို. လေးလေးကကောင်းနေပြီလားတစ်လုံးတောင်ကုန်တော.မယ် မကောင်းသေးပါဘူးဆုရယ်ညကလက်ကျန်လေးဖြိုနေတာ ညဉ်းထီးမဆောက်းလာဘူးလားခေါင်းမှာလဲရေတွေနဲ.မဖြစ် သေးပါဘူး ကျွန်တော်အခန်းထဲကမျက်နှာသုတ်ပဝါသွားယူကထိုင်နေတဲ. တူမလေးရဲ.အရှေ့ရပ်ကာတူမလေးရဲ.စိုနေတဲ.ခေါင်းအား သေချာခြောက်အောင်သုတ်ပေးနေမိတယ် အဲဒီမှာအမှတ်မထင်ဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်သတိမထားမိတာ ပြောပါတယ်အောကားကြည်.ရင်းတန်းလန်းဆိုတော.
လီးကတောင်နေတာဝတ်ထားတာကလဲပုဆိုးဖြစ်နေတော. ကျွန်တော.လီးကိုပုဆိုးပေါ်ကနေတူမလေးဆုပ်ကိုင်ပြီး လေးလေးဟာကြီးကမာတောင်နေတာပဲ ဟဲ.လွှတ်လွှတ်ဒီကောင်မလေးအဲဒါဆော.စရာမှတ်နေလား မလွတ်ဘူကွာဆုအခုဆိုအသက်နှစ်ဆယ်တောင်ပြည်.ပြီး လို.ရည်းစားတောင်ရနေပြီလေးလေးဟာကြီးကကိတ်လို. ကိုင်ကြည်.တာဘာဖြစ်လဲ နင်.ရည်းစားဟာနင်ကိုင်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးနင်နဲ.ငါကဦးလေး နဲ.တူမမကိုင်ရဘူး မလွတ်ပါဘူးဆုရည်းစားကစာဂျပိုးစာကလွဲရင်ဘာမှသုံးစားမ ရဆုဒီလောက်လမ်းကြောင်းခင်းတာတောင်ဘာမှမဘာဘူး ပြီးတော.ဆုအင်းစက်အရာသာဆိုတာဘာလဲမြည်းစမ်းကြည်. ချင်တယ်လေးလေးကဆုရဲ.ချစ်လေးလေးပဲဟာကို လေးလေးအင်းစက်ဆိုတာရောသိရဲ.လား ဟငါကလူကြီးပဲမသိပဲနေမလား။
ဒါဆိုလေးလေးနဲ.ဆုတို.အင်းစက်အရသာအတူတူမျှဝေခံစား ကြမလေ တူမလေးကစကားသာပြောနေတာလီးချောင်းကြီးအား ဂွင်းဆွဲပေးသလိုဆွပေးနေတော.ကျွန်တော.စိတ်တွေပါလာ တယ်အဲဒီအထိစိတ်ထဲတင်ထားပေမယ်.ဆုလေးကပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပြီးကျွန်တော.လီးဒစ်ခေါင်းကြီးကိုဖြတ်ကနဲဆွဲစုပ်တော. ကျွန်တော.အသိစိတ်တွေဝေးကွာသွားပြီးတူမလေးရဲ.လီးစုပ် ပေးမှုအားသာယာပြီးသူ.ခေါင်းလေးအားအလိုက်သင်.လေး ထိန်းပေးကာကိုယ်ကပါသု.ပါးစပ်လေးထဲလီးချောင်းကြီးအာ.း ဆောင်.ထိုးနေမိပါတယ် ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပလပ်ပလပ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်………………… အိုးကောင်းလိုက်တာဆုလေးရယ်အိုးအိုးဟူးဟူး တူမလေးကမခေဘူးဗျစုပ်ချက်တွေကထိထိမိမိနဲ.ပညာသားပါ လွန်းပါတယ်လီးဒစ်ခေါင်းကြီးအားလျှာနှင်လိပ်ကာလျှပ်လိုက်
လီးချောင်းကြီးအားအောက်ချေမှဒစ်ဖျားဆီသိုလျှာအပြားလိုက် ပင်.လျှပ်လိုက်ဂွေးအုနှစ်လုံးကိုလည်းတစ်လုံးချင်းစုပ်ငုံလိုက်နှင်. ကျွန်တော်.မှာဖီတွေလှိမ်.ကာလှိမ်.ကာတက်လာတာဒစ်ခေါင်း ထိပ်ဆီသိုလရည်တွေအတင်းဆောင်.တိုးကာပန်းထွက်ချင် သလိုလိုဖြစ်လာရသည် ဆုလေးအအလေးလေးထွက်တော.မယ်ဖယ်ဖယ်အအ လေးေးပန်းထည်.လိုက်သမီးပါးစပ်ထဲမှာပဲပြီးလိုက် သမီးမျိုချပြစ်လိုက်မယ် အားမရတော.ဘူးအအအရှီးဖလွတ်ဖလွတ်ဗြစ်ဖလွတ် ကျွန်တော.လရည်တွေကတူမလေးရဲ.ပါးစပ်ထဲအရှိန်ပြင်းစွာ ပန်းဝင်ပြီးများလွန်းလိုတုမလေးရဲ.နုတ်ခမ်းထောင်.နှစ်ဖက်စီက နေပြန်လျှံကျလာလို.တူမလေူးကလက်ဝါးလေးနဲအမြန်သပ် ပြီးအကုန်မြိုချပြစ်တယ် လေးလေးလရည်တွေကညှီစို.စို.ငံကြိကြိနဲ. ဟိဟိ နင်လရည်မသောက်ဖူးဘူးလား မသောက်ဖူးပါဘူးသမီးပါးစပ်ထဲဝင်တာလေးလေးလရည်က ပထမဆုံးပဲနွေနေတာပဟိ..။
အေးပါပါးစပ်ထဲတင်မဟုတ်ဘူးစောက်ဖုတ်လေးထဲရော ဖင်ခေါင်းထဲပါလရည်ထည်.တော.မှာ လေးလေးကသမီးကိုဖင်ပါလိုးမှာလားရင်ခုန်စရာကြီး ကဲကဲဆုလေးအဝ်အစားတွေချွတ်ပြစ်လိုက်တော. နင်.စောက်ဖုတ်လေးကိုငါဖြဲပြီးအပြီလျှပ်ပေးအုံးမယ် လေးလေးသမီးစောက်ပတ်လေးလျှပ်ရင်သမီးငရဲကြီးမှာပေါ. ကြီးကြီးဟာကို.တူမစောက်ပတ်လေးသေချာလျှပ်ပေးချင် သေးတယ် အဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ်လိုက်တော.တူမလေးရဲ.ခနာကိုယ် လေးကပိုပြီးအသည်းယားပြီးကြိတ်ချင်စဖွယ်လေး နို.လေးနှစ်လုံးကလည်းဖြူအုနေပြီးနို.သီးခေါင်းလေးတွေကရဲလို. ပေါင်တံနှစ်ချောင်းလည်းဖျောင်.စ်းကာစောက်ဖုတ်ဖြူဖြူလေး ကသိသိသာသာဖောင်ထလို.နေတယ်စောက်မွှေးလုံးဝမရှိပဲ ပြောင်ပြီးဖွေးနေတာပဲဗျာလိုးချင်စရာလေးပေါ. လေးလေးဘာစိုက်ကြည်.နေတာလဲကွ.ဆုရှက်လာပြီ
ငါ.တူမလေးကလှလွန်းတော.မင်သက်မိသွားတာ ကျွန်တော်ဆုလေးအားအသာဖက်၍သူမရဲ.နုတ်ခမ်းပါးလေး အားကြင်နာစွာနဲ.စုပ်ယူသလိုဆုလေးကလည်အလိုက်သင်.လေးပြန်လည်ကာစုပ်ကျွန်တော်လျှာနဲ.ဆုရဲ.လျှာလေးရစ်ပတ် စုပ်ယူနဲနှစ်မိနစ်ခန်.ကစ်ဆင်ရိုက်တာတူမလေးမှာ မျက်လုံးလေးကိုစင်းလို. ကစ်ဆင်ဆွဲလို.ဝတော.ဆိုဖာပေါ်ထိုင်စေ၍ဆုလေးရဲ.ောင်နှစ်ဖက်ကိုဖြဲကာပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲခေါင်ထိုးဒူးထောက် ထိုင်၍မိုမောက်နေတဲ.စောက်ဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးကိုလျှာ အပြားလိုက်အပေါ်မှအောက်အောက်မှအပေါ်သို.ပင်.လျှပ်ပေး မိပါသည် အွန်း အူး ကောင်းလိုက်တာလေးလေးရယ် အင်းဟင်းဟင်း ကောင်းလိုက်တာ အရမ်းဖီးရှိတာပဲ ဟင်.ဟင်. အဟ်. ဟင်း လေးလေးရယ် တူမလေးကတော.ကျွန်တော်.ဆံပင်တွေကိုပွတ်သပ်ကစား ရင်းဖီးတွေလှိမ်.တက်ကာစောက်ရည်တွေဗြစ်ကနဲထွကိတာ ကျွန်တော.ပါးစပ်ထဲတန်းကနဲပဲဒါပေမယ်.ထွေးမထုတ်ပြစ်မိပါ ဘူးဆက်ပြီးတော.တူမလေးရဲ.စောက်ဖုတ်လေးအားဖြဲပြီးတော. ကိုမှုတ်ပြစ်တာစောက်စိလေးကိုစုပ်လိုက်စောက်ဖုတ်အတွင်း သားနှစ်ဖက်ကိုလျှပ်ပေးလိုက်စောက်ခေါင်းပေါက်လေးကို လျာဖျားလေးနဲ.ထိုးကော်လိုက်စောက်ခေါင်းထဲလက်ခလှယ်နဲ. အဆက်မပြတ်ထိုးနိုက်လိုက်နဲ.တူမလေးအားအစွမ်းကုန်ပြုစု ပေးနေမိပါသည်။
အင်အင်းအင်းဟင်းဟင်းလေးလေးရယ် အူးဟူးဟူး အင်းကောင်းလိုက်တာ အဟင်. အင်းဟင်းဟင်း လေးလေးထွက်တော.မယ် သမီးထွက်တော. အအအအအအ ဟီး………. ဗြစ်ပြစ်ပတစ် ရှူးရှီးရှီး တူမလေးဖီးတက်ပုံများစောက်ရည်များတင်မကပဲသေများ ပါပန်ကာထွက်ကြလာသည် ဖီးတက်ပြီးမှိန်းနေတဲ.တူမလေးရဲ.ပေါင်နှစ်လုံးကြားက မို.ဖောင်းနေတဲ.စောက်ဖုတ်ကြောင်းလေးအား လီးဒစ်ခေါင်းကြီးနှင်.သေးတိတ်တဲ.အထိအထက်အောက်ဖိ ကပ်ပွတ်ပေးနေရင်းမှသေးထွက်တာရပ်သွားတော. စောက်ဖုတ်ဝလေးမှာလီးဒစ်ခေါင်းကိုသေသေချာချာတေ.ကာ စောက်ဖုတ်လေးထဲထိုးသွင်းလိုက်ပါသည် ဗြိ ဗြိ ဗြိ ဗြုတ် အမေ.အားလားလား နာတယ် လေးလေး နာလိုက်တာ အပျိုစင်စောက်ဖုတ်လေးကလီးဒစ်ခေါင်းကြီးထိုးခွဲမှုကြောင်. ပြဲဟနေကာစောက်ဖုတ်လေးထဲလီးကနှစ်လက်မလောက် မှုပ်ဝင်နေပါသည်
ဆုလေးကိုကြည်.တော.မျက်ရည်လေးဝဲလို. ဆုလေးရရဲ.လားခံနိုင်ရဲ.လားအရမ်းကောနာနေလား နာတော.နာတာပေါ.လေးလေးကအတင်းထိုးထည်.တာကိုး အရမ်းကြီးပဲဖြည်.းဖြည်းချင်းထည်.ပါလားကိုယ်.တူမလေးကို အေးပါစုရယ်ကဲကဲနည်းနည်းထပ်ထည်.ကြည်.မယ် ဗြိဗြိဗြုတ်ဖောက် အားသေပြီ ကွဲပါပြီလေးလေးရဲ.အီးဟီးဟီး လီးဒစ်ခေါင်းကြီးကပါကင်ပေါက်လေးအားထိုးခွဲပြီး ငါးလက်မခန်.စောက်ဖုတ်လေးထဲမြုပ်ဝင်ကာနေသည် စည်းခုံလေးကလည်းအထဲသို.ကျွံဝင်လို. လီးကိုစောက်ဖုတ်လေးထဲကအပြန်ဆွဲထုတ်တော. စောက်ဖုတ်နုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကအပြင်ဘက်လန်ထွက်ပါလာကာ လီးချောင်းတစ်ဝက်ကျော်ခန်.သွေးများစိုနေသဖြင်. လီးကိုစောက်ဖုတ်အပြင်ဘက်ထုတ်ကာသွေးများအားပြောင် အောင်သုတ်၍လဒစ်ခေါင်းအားတံတွေးစွတ်ကာစောက်ဖုတ် ဝ၌ပြန်တေ.ကာစောက်ဖုတ်လေးထဲတဆုံးထိထိုးသွင်းလိုက် ပါသည်။
အအအအ အီးဖြေးဖြေး အားနာတယ်လေးလေး အီး တူမလေးကတော.သူမစောက်ဖုတ်လေးထဲလီးထိုးထည်. လိုက်တိုင်းအော်ချင်ရာအော်တော.တာပါပဲ စောက်ဖုတ်လေးကအပျိုစစ်တော.ကြပ်ထုတ်နေပြီး လဒစ်ထိပ်ကထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ.လိုးရတာအရမ်းဖီးတွေ. သွားသဖြင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင်.ထိုးလိုးပြစ်မိသည် ဗြုတ်ဗြုတ်ဗြုတ်ဗြုန်းဖောက်ထုတ်ဘုတ်ဗြွတ် အအအအအအအအ အီးအီးအီး အူးအူးအူးမေကြီးရေ စောက်ဖုတ်လေးထဲကချောဆီတွေတရွမ်းရွမ်းထွက်လာ သဖြင်မျက်လုံးမှိတ်ပြီးအသားကုန်နင်းကန်ဆောင်.လိုးတာ တူမလေးကနာလို.အတင်းကုတ်ဖဲ.အော်ဟစ်ကျွန်တော်က လည်းအသားကုန်အပြီမညှာမတာဆောင်.လိုးနဲ. တခန်းလုံးဆူညံနေပြီးနာရီဝက်လောက်ကြာတော. စောက်ရမ်းဖီးတက်လာပြီးပိုပြီးမြန်မြန်လေးဆောင်.လိုး တူမလေးကလည်းဖီးတက်လာလို.လားတော.မသိဘူး အတင်းကုန်းထပြီးကျွန်တော.အားဖက်ပြီးစောက်ဖုတ်လေးကို ကျုံ.ထားကျွန်တော်ကအသာထပြီချီပြီးလွှဲလိုးတာ တဗြောင်းဗြောင်းနဲ.ကိုအသံထွက်တယ် အားရပါရးကိုလွှဲလိုးတာတူမလေးအော်တာကလဲ လိုးသတ်နေတဲ.အတိုင်းပဲချီပြီးအပြီဗြင်းနေတုန်းဆယ်မိနစ် ခန်.မှာပဲတူမလေးရောကျွန်တော်ပါပြိုင်တူလိုလိုပြီးသွား ကြပါတယ်စောက်ရည်တွေကကြမ်းပြင်ပေါ်တစ်တောက် တောက်ကျလို.ရယ်ကျွန်တော်.လရည်တွေကတော. တုမလေးရဲ.စောက်ခေါင်းထဲမှာပေါ.လိးဆို.နေလို.သာ ပြန်မကျသေးတာတူမလေးအားချီထားလျက်ပင်အမောဖြေ နေမိပါသည်။
တူမလေးကကျွန်တော.အားခပ်တင်းတင်း ဖက်ထားရင်းတအင်းအင်းညဉ်းလျှက်ရယ် ကျွန်တော်အမောပြေတော.တူမလေးအားချီလျက်ပင်ရေချိုး ခန်းထဲခေါ်သွားကာရေချိုးခန်းထဲရောက်မှချီထားရာမှအသာချ ကာမက်တပ်ရပ်ကုန်းခိုင်းထားပြီးပျော.နေတဲ.လီးအာဂွင်းတိုက် ကာပြန်ဆွ၌ရေပန်းကိုဖွင်.ကာရေပန်းအောက်၌တူမလေးအာ မတ်တပ်ရပအနေအထားနဲ.သူမရဲ.နို.လေးနှစ်လုံးအာညစ်ကာ အနောက်ကနေအပြီဖြုတ်ပါသည် ခါးလေးကိုင်ပြီးဆောင်.လိုးလိုက်ဆံပင်ဆောင်.ဆွဲပြီး အသာကုန်လိုးလိုက်နှင်.တော်တော်လိုးရတာ စိတ်တိုင်းကြလှပါသည်အရမ်းလဲဖီးရှိလှသည် ပေါင်လေးတစ်ချောင်အသာမရင်းနင်းကန်ဆောင်. ထည်တာတူမလေးမှာအာခေါင်ခြစ်အော်လွန်းလို. သူမရဲ.ပါးစပ်ကိုပိတ်ရင်အဆက်မပြတ်မနားတမ်းဖိကပ်ပြီး နွားသိုးကြိုးပြတ်လိုးတာကျွန်တော်သူမစောက်ခေါင်းထဲ လရည်တွေပန်းထွက်သွားတော. တူမလေးမှာကြမ်းပြင်ပေါလေးဘက်ထောက်လေး ကုန်းကုန်းလေးလဲကာအသဲမထွက်တော. လီးကလရည်သာထွက်တာမာတောင်နေဆဲစိတ်ထဲက လည်းမတင်းတိမ်နိုင်သေးသဖြင်တူမလေးရဲဖင်ကိုဖြဲကာ ဖင်ပေါက်ထဲသို.လီးအားအတင်းထိုးကာအဆုံးထိထည်. ရင်အပေါ်ကနေခွပြီအားရပါးရလိုးတာတူမလေးမှာအော်ရလွန်း လို.အသံတောင်မထွက်နိုင်တော.ဘူး တူမလေးဖင်ကိုစိတ်လွတ်လက်လွတ်အသားကုန်ကို လိုးတာတူမလေးမှာသတိလစ်ပြီးသေးတွေပန်းထွက်လို.ရယ် ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။
မရပ်မနားဆောင်.ထည်.တာလဒစ်ထိပ်ကမတရားတင်းလာပြီး တူမလေးရဲ.ဖင်ထဲမှာပဲလရည်ထွက်ကာသွားပါတယ် လိုးလို.ကောင်းလိုက်တာတကယ်ပါပဲ ခနာကိုယ်တစ်ခုလုံးအားအင်ကုန်ခမ်းသွားသလိုပါပဲ တူမလေးကလဲကြမ်းပြင်မှာခွေခွေလေးကျွန်တော်တူမလေး ၌လှဲကာတာူမလေးအားဖက်လို.အိပ်ပျော်သွားမိပါတော.တယ် ကျွန်တော်.လိုးချက်တွေကြောင်. လှပမို.ဖောင်းလှတ.စောက်ဖုတ်လေးဟာအခုတော. အတွင်းသားနှစ်ဖက်အပြင်ဘက်သို.လှန်ထွက်ကာ အရင်ကကဲ.သို.လှပမှုမရှီတော.ပါ အရာရာအားလုံးဟာလွန်ကျွံသွားရင် အကောင်းတိုးပြန်ဖြစ်မလာနိုင်ပါ………… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အကောငျးတိုငျးမဖွဈ